Waa Shaqsi Ceynkee Ah Xildhibaan Mustaf Dhuxuloow Waxbadan Ka Ogoow Xogmuhiima'
Tuesday April 17, 2018 - 21:24:23 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali dhuxuloow oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Fedaraalka Somalia,xilal kala duwana kasoo qabtay Xukumadahii Dalka soo maray, ayaa noqday shaqsi kasbaday quluubta Shacabka sababaha soo socdo awgeed.
1: Xildhibaan Mustaf Dhuxuloow waa shaqsi ixtiraam baddan qofwalba oo Bulshadda kamid ahna ka dhageesta fikirka u qabo dawladnimo iyo Homumarka Dalka jecel isaga iska fogeeyay isla weyni Masuuliyinta kale oo aay ugu horeeyaan Xildhibaanada wuxuu kaga duwan yahay cidkasto soo wacda telefoonkiisa gacanta durba wuu ka qabta ama fariin qoraal usoo diro.
2: Xildhbaanka sida la xaqeejiyay Mushaarka Xilka uu Dowladda uu ka haayo wuxuu ku caawiya Bulshadda kuwooda taagta daran isaga oo Qabiilka aay ka soo jeedan u fiirin wuxuu waayahii danbe joojiyay in la baahiyo goobaha uu dadkaasi ku caawiyo si aynaan dadka qaar ee aan xilkaska aheyn u arag in danno gaara ka leeyahay.
3: Xildhibaan Mustaf Dhuxuloow wax cabasho iyo saluug ah toona lagama maqal Beesha uu ka dhashay sidoo kale waxaayna aaminsan yahiin in uu yahay shaqsi Howlkar ah waxaayna ku qanacsan yahiin Xilka uu ku matalo, Xildhibaanada Golaha shacabka kamidka ah inta baddan in aay bulshadda qanciyaan wey adag tahay waxaana dhaliilsan Beelahi aay ka soo jeeden iyaga oo sheega in Telefanada aynaan ka qaban markii Masuuliyad loo dhiibo.
4: Shaqsiyaad Siyaasiyiin ah oo Siyasaadda ku fashilmay oo adeegsanaya Warbaahinta Qeyb kamid ah oo ka xun Horumarka shaqsi ee uu gaaray Xildhibaan Mustaf Dhuxuloow kahdayna shaqada samafalka ee uu sameeyo ayaa Hiifa iyaga oo haddba ku shabeeya in u yahay shaqsi daniiste ah taaso ah dacaayad.
Taariikhiyan Cumar Bin Khadaab ( RC ) baa ugu sareeya Hogaamiyayaasha Caalamka. Cumar wuxuu ku hantay madashan sare Cadaaladii ayuu xaqiijiyey in aduunyada laga fulin karo Cadaaladu waa hadafka Siyaasada. Mucaaridka & Muxaafidkuba waxay ku hirdamaan tixgelinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka. sirta siyaasaduna waa awooda fulinta ee cadaalada.
Hogaamiyayaasha shaqadoodu waa samato bixinta Bulshooyinkooda. bulsho bilaa Hogaamiye wanaagsan aan helin waa bulsho fashilantay: bulshadii fashilantana Caalamkaa Farataysta Xildhibaan Mustaf Dhuxuloow wuxuu mudan yahay Sadaxda masuuliyadeed Dalka ugu sareeyo midkood.